Ujyaalo Sandesh | » के चाहन्छन् अफगानिस्तान कब्जा गरेका तालिबान? के चाहन्छन् अफगानिस्तान कब्जा गरेका तालिबान? – Ujyaalo Sandesh
उज्यालो सन्देश August 20, 2021
२० वर्षपछि अफगानिस्तान कब्जा गर्न सफल तालिबान को हो?
अघिल्लो सातासम्म पनि अमेरिकी विश्लेषकहरू भन्दै थिए- अफगानिस्तानको राजधानी काबुल तालिबानको कब्जामा पर्न अझै केही समय लाग्छ।
उनीहरूले एकदेखि तीन महिनासम्म लाग्ने अनुमान गरेका थिए।
अमेरिकी सेनाले छाड्नेबित्तिकै कसरी तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमायो? आखिर तालिबान के चाहन्छ? तालिबान को हो? यस्ता प्रश्न अहिले धेरैको चासोको विषय बनेको छ।
सबभन्दा पहिला कुरा गरौं, तालिबान को हो?
यही क्रममा सन् १९९६ मा जब सुन्नी इस्लामिक संगठन तालिबानले काबुल कब्जा गर्‍यो, तब देशमा उनीहरूले एकदमै कडा नियम लागू गरे। महिलाहरूले टाउकोदेखि कुर्कुचासम्म ढाकिने गरी बुर्का लगाउनुपर्ने, पढ्न वा काम गर्न, एक्लै घरबाहिर हिँडडुल गर्न नपाउने नियम लादे। त्यस्तै टिभी, संगीत र गैरइस्लामिक बिदाहरूमा प्रतिबन्ध लगाए।
लामो समय अफगानिस्तानी नागरिकले तालिबानको कडा घेराबीच नियम मानेर बस्नुपर्‍यो।
सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि भने यो अवस्था फेरियो।
तालिबानका नेताहरू को हुन्?
अमेरिकी सेनाले पाकिस्तानको एबोटाबादमा हवाई हमला गरेर बिन लादेन मारेको घटनामा तालिबान समूहका पूर्वनेता मुल्लाह अख्तर मोहम्मद मन्सुरको समेत हत्या भएको थियो। त्यसपछि हाइबतुल्लाह नयाँ नेता चुनिएका हुन्।
हाइबतुल्लाह नेता भएपछि तालिबानले अझ जवान र सैन्य खुबी भएका युवाहरूलाई भर्ती गर्न थालेको अफगानी विश्लेषकले बताएका छन्।
उता तालिबानले अलकायदा जस्ता कुनै पनि आतंकवादी समूह वा व्यक्तिलाई अफगानिस्तानी भूमिमा बसेर अमेरिका वा अरू देशको अहितमा काम गर्नबाट रोक्ने सहमति जनायो।
तर यो शान्ति सम्झौता कागजमा मात्र सीमित भयो।
तालिबान के चाहन्छ?
तालिबानले पछिल्लो समय आफूलाई विगतमा भन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। उनीहरूले आफूहरू शान्ति प्रक्रिया र एकीकृत सरकारमा प्रतिबद्ध भएको दाबी गरेका छन्।
महिलाका निम्ति केही अधिकार कायमै राख्न इच्छुक भएको पनि बताएका छन्।
त्यस्तै कूटनीतिज्ञ, पत्रकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले अझै अफगानिस्तानमा बसेर काम गर्न पाउने/सक्ने पनि शाहीनले बताएका छन्।
‘उनीहरूले सुरक्षित वातावरणमा रहेर अफगानिस्तानका मान्छेका लागि काम गर्न सकून् भनेर यो हामीले गरेको प्रतिबद्धता हो,’ तालिबानका प्रवक्ता शाहीनले भनेका छन्।
विश्लेषकहरू यसमा ढुक्क छैनन्।
(सिएनएनको सहयोगमा तयार पारिएको)